Askar Ka Tirsan Ciidanka Jubbaland oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weerar Ka Dhacay Duleedka Kismaayo. – Shabakadda Amiirnuur
August 24, 2019 5:22 am by admin Views: 181
Xarakada Al-Shabaab oo dagaal kula jirtay ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo maamullada ku daaban ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ka geysatay tuulo dhacday duleedka magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku beegsatay askar ka tirsan kuwa Jubbaland.
Wararka naga soo gaaraya tuulada Qaamqaam ee duleedka Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen meel Isbaaro u tiil ciidanka Jubbaland, ayna halkaa dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro askar ah.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkan ku naf waayay sadax askari ka diiwaan gashanaa Kismaayo halka mid kalana uu ku dhaawacmay. Isbaarada ayaa ahayd mid lacago looga qaado gaadiidka dad weynaha sida ay inoo sheegeen qaar ka tirsan shacabka tuulada.
Shalay ayay ahayd markii ay Al-Shabaab qarax weyn la beegsadeen gaari ay la socdeen askar Mareykan ah xilli uu marayay meel u dhow Buulogaduud, waxaa kasii horreeyay weerar lagu beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan kuwa J/land waxaana hawl galkaasi ku dhintay laba sarkaal iyo ciidamo.
Maamulka Jubbaland ayaa ku tiirsan ciidamada Kenya oo Kismaayo qabsaday sannadkii 2011kii.